Hitan'ny seranam-piaramanidina Frankfurt ny fihenan'ny fifamoivoizana: ny fitokonana no antony
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Hitan'ny seranam-piaramanidina Frankfurt ny fihenan'ny fifamoivoizana: ny fitokonana no antony
Fizahan-tany azo idirana • Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Nisy fiantraikany ratsy tamin'ny volan'ny mpandeha FRA ny fitokonana - Ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny Fraport's Group dia mitatitra ny fitomboan'ny fifamoivoizana.
Tamin'ny volana novambra 2019, ny seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) dia nandray tsara ny mpandeha efa ho 5.1 tapitrisa - maneho ny fihenan'ny 3.4 isan-jato raha oharina tamin'ny volana tamin'ny taon-dasa. Ny fandaharam-potoanan'ny sidina ririnina nahena sy ny fitokonan'ny mpiasan'ny kabine Lufthansa nandritra ny roa andro dia nisy fiatraikany ratsy tamin'ny isan'ny mpandeha. Raha tsy nisy ny fitokonana, ny fifamoivoizan'ny mpandeha FRA dia hihena kely tamin'ny 1.1 isan-jato isan-taona.
Ny fifamoivoizana intercontinental mankany sy avy any Frankfurt dia nitombo hatrany 2.1 isan-jato. Mifanohitra amin'izany kosa, ny fifamoivoizana eropeana dia nidina tamin'ny 6.5 isan-jato noho ny fatiantoka amin'ny sidina sy ny anton-javatra hafa. Ny hetsiky ny fiaramanidina dia nihena 5.8 isan-jato ka hatramin'ny 38,790 niainga sy niantsona. Ny lanjan'ny fihenam-bidy farany ambony indrindra (MTOW) dia nifanekena tamin'ny 4.0 isan-jato ka hatramin'ny 2.4 tapitrisa metric taonina. Ahitana taratra ny fitontongan'ny toekarena manerantany, ny fidiran'ny entana (misy ny zotram-piaramanidina sy ny fiaramanidina) dia nidina 5.0 isan-jato ho 186,670 metrik taonina.
Ny talen'ny birao mpanatanteraka ao Fraport, Dr. Stefan Schulte, dia naneho hevitra hoe: Vokatr'izany dia manantena izahay fa ny fifamoivoizana mpandeha iray taona any Frankfurt dia hitombo amin'ny hafainganam-pandeha somary miadana kokoa noho ny vinavinantsika teo amin'ny roa ka hatramin'ny telo isan-jato. Na eo aza ny fitomboan'ny fifamoivoizana somary miadana kokoa, mitazona ny fomba fijerinay ara-bola mandritra ny taona iray manontolo izahay 2019 - tohanan'ny fiakarana ara-bola tsara hita hatreto Frankfurt sy miaraka amin'ny orinasantsika iraisam-pirenena. ”
Manerana ny Vondrona, ny seranam-piaramanidina ao amin'ny portfolio iraisam-pirenena Fraport dia nahomby tamin'ny volana novambra 2019. Voakasiky ny fatiantoka ny mpitatitra an-trano, Adria Airways sy ny anton-javatra hafa, ny Seranam-piaramanidin'i Ljubljana (LJU) any Slovenia dia nitatitra ny fihenan'ny 27.0 isan-jaton'ny mpandeha ho an'ny 85,787 mpandeha. Ary ny seranam-piaramanidina Breziliana roa an'ny Fortaleza (FOR) sy Porto Alegre (POA) dia nahitana fihenan'ny fifamoivoizana 2.2 isan-jato tamin'ny mpandeha 1.3 tapitrisa mahery. Ny antony voalohany dia noho ny fatiantoka an'i Avianca Brasil sy ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Azul mampihena ny tolotra fandosiran'ny sidina. Ny seranam-piaramanidina Lima any Lima (LIM) dia nandrakitra fitsangantsanganana 6.9 isan-jato
mpandeha 1.9 tapitrisa eo ho eo.
Miaraka amin'ny mpandeha 727,043 amin'ny ankapobeny, ny seranam-piaramanidina rezionaly 14 any Fraport dia nitazona ny haavon'ny taona lasa (miakatra 0.1 isan-jato). Ny seranam-piaramanidina Bulgaria's Varna (VAR) sy Burgas (BOJ) dia nanoratra mpandeha 83,764 - nitombo 22.7 isan-jato, na dia teo aza ny fivezivezena ambany
Volana Novambra tamin'ny taona teo aloha.
Seranam-piaramanidina Antalya (AYT) any Torkia no nandray mpandeha efa ho 1.4 tapitrisa, maneho tombony 11.8 isan-jato isan-taona. Ny fifamoivoizana tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Pulkovo St. Petersburg (LED) any Rosia dia nanoratra fitomboana 6.8 isan-jato ho an'ny mpandeha 1.4 tapitrisa. Tao amin'ny seranam-piaramanidina Xi'an (XIY) any Shina, nihanika 4.9 isan-jato ny mpandeha ka hatramin'ny mpandeha efa ho 3.8 tapitrisa.